Rlọ oriri na ọụrụ na-edozi ahụ na-acha uhie uhie na-acha odo odo, China na-edozi mkpuchi ime ụlọ mkpuchi Soft Blackout Eyelet Brown Curtains Manufacturers, Suppliers, Factory - Zhejiang Rancho Santa Fe home akwa Co., Ltd
AKW DKWỌ AKW &KWỌ & PREMIUN ULỌ - N'iji atụmatụ pụrụ iche na nke dị elu, ákwà ngebichi ga-eme ka mma ụlọ maa mma ma mepụta ọnọdụ dị jụụ maka ụlọ ọ bụla n'oge ọ bụla. Uwe ahụ n'onwe ya bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu n'ụwa niile. Site na mma mara mma, ọ na-enye ikuku dị mma ma dịkwa mma maka ime ụlọ. Ihe bụ 100% polyester, ọ nwere ike igbochi 85% -93% ọkụ na UV ray.
MGBE NA-ACH & & IHE KWES THR TH SLỌ –LỌ - ha bụ ákwà mgbochi ma ọ bụ ákwà ngebichi. Ibu akwa bụ site na 200gsm ka 320gsm. Ha dị nnọọ nro ma nwee obi ụtọ iji metụ aka. Mgbakwunye zuru oke maka ime ụlọ ihi ụra, ime ụlọ, ime ụlọ ụmụaka na wdg. Nhọrọ ahọpụtara ahọpụtara, enweghị mkpirisi mkpirisi, yana njikwa njikwa dị mma maka ahụmịhe ngwaahịa ka mma.
Emere site na 100% adịchaghị mma Super Soft fabric (Polyester, Imported). Umi pensụl pleat blackout ákwà ngebichi na-adịgide adịgide ma na-atọ ụtọ ịmetụ aka. Ugboro okpukpu atọ nke Technology Technology bụ ọkụ na-asọ asọ na-asọba na akwa pụrụ iche zoro ezo nke na-egbochi ìhè maka ụra izu ike. Yabụ na ọ nwere ike ijide n'aka na ụwa ndị ọzọ agaghị enye ndị mmadụ nsogbu.